ကလိုစေးထူး: ကျနော်နှင့် တိုင်းရင်းသားများ
Dec 9, 2006, 11:35:00 AM
ဒါတွေကတော ရှိနေအုံမှာပဲ။ ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ်ဆိုတာတော ကိုယ်တိုင်ပဲ အဖြေရှာကြတောပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က ကြည့်၇င်လည်း သူတို့ကို အပြစ်မဆိုသာပါဘူး သူတို့ ခံစားရတာကို။ မပြုလုပ်ပဲ အပြောခံ၇တဲ့ ဗမာတွေအတွက်ကျတောလည်း အခုလို တွေးကြပြန်ရော ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီ ရလာတဲ့ တနေ့မှာ ပျောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
well, I have different experiences. Our friends met each other in one of Institute , Yangon. Most of friends are from minority groups (Shan, Kachin,Mon,Kayar,and Yakhine).Surely, many Bamar were in our group. We do not have any negative feeling each other (for each race). We still have strong relationship even after graduation.
Dec 12, 2006, 6:54:00 AM
ပြောင်းလဲချင်ရင် ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူးတဲ့။ ဘယ်လိုလာမလဲ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
Dec 17, 2006, 10:23:00 PM
very nice post..ko say htoo